.: မွေးနေ့ကိတ်ပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းရခြင်းအကြောင်း
မွေးနေ့ပွဲများ ကျင်းပသောအခါ မွေးနေ့ကိတ်ပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းသောဓလေ့မှာ မြန်မာတို့၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာလည်းမဟုတ်ပါ။ သိပ္ပံအမြင် သိပ္ပံသဘောတရားတို့နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းလည်းမရှိပါ။
မွေးနေ့ကိတ်ပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းသော ဓလေ့ကို ရှေးခေတ်ဂရိလူမျိုးတို့က စတင်ခဲ့သည်ဟု လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ဂရိတို့ ကိုးကွယ်သော ဇုနတ်မင်းကြီးနှင့် ၄င်း၏ကြင်ယာတော် လီတို တို့တွင် အမြွှာညီအစ်မနှစ်ဦးရှိလေသည်။ တစ်ဦးမှာ အပိုလို နတ်သမီး (နတ်သား) ဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာ အာတီးမစ်နတ်သမီး ဖြစ်လေသည်။ အပိုလိုနတ်သမီး (နတ်သား) သည် လ (နေ) ကိုစောင့်ရှောက်သော တာဝန်ကို ယူရပြီး အာတီးမစ် နတ်သမီးသည် အမဲလိုက်သူများနှင့် ကလေးသူငယ်များကို စောင့်ရှောက်သည်ဟု ယုံကြည်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အာတီးမစ် နတ်သမီး၏ရုပ်ပုံတွင် လေးနှင့်မြားကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲလေ့ရှိပါသည်။
(အမှားပြင်ဆင်ထားပါတယ် အခုလို အမှားရှိတာကို ပြင်ပေးခဲ့တဲ့ ကိုဖိုးသင်္ကြန်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အပိုလိုအကြောင်းအသေးစိတ်ကို ဒီမှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်)
မူရင်း လေးက ဒီမှာပါ။
To celebrate your life...yes everyday should beacelebration, but the day you were born, the day you entered this life. A beautiful life that deserves to be celebrated with family and friends.
ပြီးတော့ 29.12.2009 မှာ ကျရောက်တဲ့ ကိုတောသားလေး ရဲ့ မွေးနေ့ အတွက်လည်း အမှတ်တရပါ။ ဘလော့ဂါတွေထဲကနေ အကိုအရင်း တစ်ယောက်လို ခင်မင်မိတာအမှန်ပါပဲ။ ပြီးတော့ fb မှာ ဂိမ်းတူတူ ဆော့ဖော်ဆော့ဖက်ပေါ့း)) ကော်ဖီဆိုင်မှာ စားပွဲလည်းထိုးရ ၊ စားသောက်ဆိုင်မှာလည်း စားဖိုမှူးလုပ်ရ၊ ဘောလုံးအသင်းမှာဆိုလည်း ၀င်ကန်ပေးရသေးတယ်လေ၊အခုဆို သူက level တွေလည်း တော်တော်တက်နေပါပြီ :D ဘလော့အတွက် ၊ နိုင်းဆိုဒ်တွေမှာလည်း လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေ၊ သိတာတွေ ပြောရင်း၊ အကူအညီပေးရင်းနဲ့ ခင်မင်လာခဲ့ကြတာပါ ဒီနေ့လို ကျရောက်လာတဲ့ မွေးနေ့မှသည် နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင် မိသားစုတွေ၊ နီးစပ်ရာသူငယ်ချင်းတွေ၊ ဘလော့ဂါ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ အားလုံးနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ဘ၀ခရီးလမ်းကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီး အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ဓမ္မစာပေများ ဆက်လက်ဖြန့်ဝေ ရေးသားပေးနိုင်ပါစေ၊ ကိုတောသားလေးတစ်ယောက် ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာပြီး မွေးနေ့တိုင်း မွေးနေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဖြတ်သန်းကာ သာ့သနာအကျိုး ဒီ့ထက်မက ဆက်လက် ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေလို့ အဝေးတစ်နေရာကနေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Waing at 12/29/2009 04:58:00 PM
ဒါကြောင့် မွေးနေ့ကိတ်ပေါ်မှာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းတာကိုး ခုတော့ သိပြီ
လူပေါ် လူဇော် လုပ်ဖို့ အသိတစ်ခုတိုးသွားပြီ..
မှတ်သားစရာတစ်ခုပါဘဲ။ ဒီလို သိလိုက်ရတော့လဲ အော်... ဒီလိုပါလားဆိုပြီး ဗဟုသုတယူသွားပါတယ်။
၀ိုင်းရေ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပဲ အခုမှပဲ သိတော့တယ်။ နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
Thanks for sharing knowledge. :D
မွေးနေ့ရှင်ရော မွေးနေ့ဆုတောင်း စာစုလေးရေးသူရော
အမဖြင့် မှားမှန်းတောင်မသိဘူး အဟိ